Ubundlobongela obunokwenzekayo kwabantwana abafazi abakhulelweyo kunye neentsana zabo ezingakazalwa
Apha uya kufumana amaphepha afanelekileyo okubanjiswa komntwana, ekubhekiselwe kuye njengokuba ngumtshina wesisu, ukuthunjwa kwe-Caesare kunye nokutsalwa komntwana. Izigwenxa ezenza ukuxothwa zibizwa ngokuba ngabahlaseli besibeleko.
Ulwaphu lwe-Fetus luhlobo olutsha olutsha lwezobugebengu e-US, nangona ityala lokuqala elibhaliweyo lenzeke ngo-1974. Iimeko ezilandelayo zabikwa iminyaka engama-13 kamva, ngo-1987 zilandelwa yimeko echazwe ngo-1995. Emva ko-1995 ixesha phakathi kokuncithwa kwancinci izinga eliyingozi kwaye inani lezenzakalo liye landa kancane.
Ka-1996 (1), 1998 (1), 2000 (1), 2003 (1), 2004 (1), 2006 (1), 2008 (2), 2009 (2), 2011 (3), 2015 (1)
Ngaphandle kwedatha eninzi ukuthelekisa, ayikho indlela ecacileyo yokubambisa ababelethi bembilini, nangona kukho iindlela ezimbalwa ezenza umdla olwaphulo-mthetho aqala ukuwabona.
Kuzo zonke iimeko, abahlaseli besibeleko babengabesifazana ababenomdla wokuzalwa. Uninzi lwazo lwacwangciswa ngokucacileyo kwaye lufezekisa ukuhlasela kwabo yodwa. Phantse bonke baxelele amaqabane abo kunye neentsapho ezikhulelwe. Uninzi lwabo lwagqiba ekubeni luthabathe umntwana ngenxa yokuba babekholelwa ukuba babeza kulondoloza ubuhlobo babo ngendlela ethile kunye neqabane lawo.
Ngaphambi kokususa umntwana, phantse bonke abafazi benza umgudu wokuqinisekisa ibango labo lokukhulelwa. Abaninzi babenxibe iimpahla zokubeletha; bafumana imiqondiso yeefowuni kwi-intanethi; iingubo zokuthenga umntwana; ukuya emanzini emvula; Iintsapho ezinolwazi kunye nabahlobo ukuba imihla yabo efanelekileyo yongezelwe; kwaye balungiselela ikiti ngezinto eziza kufuneka ukuba zenze ulwaphulo-mthetho.
Abaphandi abasebenzayo ukuchaza iipatheni phakathi kweli qela elincinci labaphulaphuli ababulalayo banethemba lokufumana iimpendulo kwimibandela enjengokuthi, kutheni amanani ephakama ngoku? Kutheni la mabhinqa enza lo lwaphulo-mthetho?
Mhlawumbi inxalenye yezimpendulo zafihliwe ngaphakathi kwiprofayili yazo ngezantsi.
UDarci Pierce - Icandelo lesibini leMqulu lokuThatyathwa kwe-Fetus e-US
Cindy Ray. Uxhoba uCindy Ray, Ifoto yeSapho
UCindy Ray wayezinyanga ezisibhozo ezikhulelweyo xa echithwa waza wabulawa ngumfazi owayeqeshwe owayefuna umntwana naluphi na indleko. Kaninzi "
UDeborah Evans Case
Debra noSamantha Evans. I-Debra yamaxhoba kunye noSamantha Evans, Ifoto yeSapho
Imizamo yomama ongatshatangayo yokuphucula ubomi bakhe yayibonakala isebenza kude kube yenze isigqibo sokuyivula umngane wakhe. Isigqibo sabonakala sibulawe, kungekhona kuye kuphela, kodwa kubantwana bakhe. Kaninzi "
I-Carethia Curry Case
Handgun. Ubugcisa bephepha
I-Carethia Curry, eyi-17 kwaye ikhulelwe, yayingenaso isizathu sokukrokra ukuba umhlobo wakhe omtsha, owayekhulelwe, wayecebise icebo elimnandi lokumbulala aze athe umntwana wakhe ongakazalwa esibelethweni sakhe. Kaninzi "
Ukuxhaswa kweKesarean Kidnapping. Suspect Michelle Bica, iPhoto Photo
NgoSeptemba 2000, uJon noThesa Andrews babematasa ukulungele ukungena kubazali. Esi sibini esitshatileyo sasingumntwana omnandi kwaye sasitshatile iminyaka emine xa bathetha ukuqala ukwakha intsapho. Ngubani oyaziyo ukuba umhlangano withuba kunye nomfazi othile okhulelweyo, ngelixa kwisebe lesana levenkile, bekuya kubangela ukubulala, ukuthumba nokuzibulala. Kaninzi "
Ukubulawa kukaBobbie Jo Stinnett
UBobbie Jo Stinnett. Uxhoba uBobbie Jo Stinnett, Ifoto yeSapho
Ngomhla we-16 kuDisemba, 2004 umzimba weenyanga ezisibhozo uBobbie Jo Stinnett wakhulelwa e-Skidmore, eMissouri ekhaya nonina. Usana lwakhe olungazalwa luye lwacutswa kwisibeleko sakhe. Ekholelwa ukuba umntwana wesisu wasinda ekuhlaselweni, amagosa akhupha i-Alber Alert yintombazana.
Iimvavanyo zeTiffany Hall
Jimella Tunstall. Uxhoba uJimella Tunstall, Ifoto Yentsapho
Ngomhla ka-Septemba 15, 2006, amapolisa afumana isidumbu sika-Jimella Tunstall oneminyaka engama-23 esongwe kwikhephe yokuhlamba kwindawo engenamntu e-Belleville, e-Illinois. I-autopsy ibonisa ukuba umntwana wakhe ongakazalwa wayinqunywe esibelethweni sakhe kunye neesisi. Ukubanjwa nokuhlawuliswa kwimeko kwakukho uTiffany Hall, oneminyaka engama-24, umhlobo ongunaphakade waseTunstall ohlala esanala abantwana bakhe rhoqo.
Ukubulawa koAraceli Camacho Gomez
Phiengchai Sisouvanh Synhavong. Phiengchai Sisouvanh Synhavong - Ifoto Yomntu
UAraceli Camacho Gomez, 27, wasePasco, eWashington, wayengunina wabantwana ababini kunye neeveki ezimbini nje kuphela ekuzaleni unyana wakhe xa edibana noFiengchai Sisouvanh Synhavong kwindawo yebhasi. Iintlanganiso zengqesho kunye nesithembiso sezambatho zentsana zamahhala zibiza umama okhulelweyo ubomi bakhe.
Imibutho yamaLungelo eNkululeko
Izinto ze-Nihonium - Element 113 okanye iNh
Iingcebiso zokuthenga ibhayiseji esetyenzisiweyo yemidlalo yamanzi
Ukuguqula iNanometers kwi-Angstroms